Iinkampani ezijikeleze umhlaba kwiRealtyWW
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Business Directory Iinkampani ezijikeleze umhlaba
Ukubeka umhlaba ibhekisa kuwo nawuphi na umsebenzi olungisa izinto ezibonakalayo zommandla womhlaba, kubandakanya: izinto eziphilayo, ezinjengeflora okanye izilwanyana; okanye into ebizwa ngokuba yigadi, ubugcisa kunye nobuchule bezityalo ezikhulayo ngenjongo yokudala imeko entle ngaphakathi komda womhlaba. izinto zendalo ezinje ngokuma komhlaba, ukubumba komhlaba kunye nokuphakama, okanye imizimba yamanzi; kunye nezinto ezingafunekiyo ezinje ngemozulu kunye neemeko zokukhanya. Ukucwangciswa komhlaba kufuna ubuchule kubuchule bokulima nokuyila kubugcisa.